Uyazi njani ukuba i-WiFi yam ibiwe kwi-Android | Iindaba zeGajethi
Kule mihla inethiwekhi ye-WiFi ekhaya, eofisini, kwindawo yokuthengisa kunye nezinye zezona zixhaphakileyo, ngaphandle kwamathandabuzo inzuzo enkulu phantse kuzo zonke iindlela. Izixhobo zangoku qhagamshela kwinethiwekhi ngokulula nangokukhawuleza Ngale nxu lumano esisinikwa ngabasebenzisi kwaye esivumela ukuba sinxibelelane kwi-intanethi ngaphandle kwesidingo seentambo okanye ezifanayo.
Konke oku kulungile kodwa kunokwenzeka ukuba abantu Awunayo imvume yethu yokunxibelelana nenethiwekhi yethu yeWiFi connect kwaye oku kunokuchaphazela ngokuthe ngqo isantya sonxibelelwano, ukongeza ekuvumela abantu besithathu ukuba babe nomnyango wangasemva abanokufikelela kuwo idatha, iifoto, amaxwebhu, njl.
Kule meko, namhlanje siza kubona ukuba iinethiwekhi ze-WiFi zikwayindawo enomdla yokufikelela kwabo bangafuni ukuhlawulela unxibelelwano lwabo kwaye asinakuyivumela le nto kwinethiwekhi yethu. Wazi njani ukuba i-WiFi yam ibiwe kwi-Android namhlanje lukhetho olufumanekayo kubo bonke abasebenzisi kwaye ngamanyathelo ambalwa alula esiya kukufumanisa oku Unxibelelwano olungafunekiyo kwinethiwekhi yethu.
1 Guqula iphasiwedi yokhuseleko amaxesha ngamaxesha
2 Jonga izixhobo kunye needilesi zeMAC
3 I-RedBox-Iskena seNethiwekhi, isixhobo sokufumana unxibelelwano
Guqula iphasiwedi yokhuseleko amaxesha ngamaxesha
Ngaphambi kokungena emsebenzini wokufumanisa ukuba ngubani ongena ngokungekho mthethweni kunxibelelwano lwethu lwe-WiFi ekhaya, emsebenzini okanye okufanayo, sinokuthatha uthotho lwezinto ezisisiseko esinokuthi siziphephe kwezi ndlela zingafunekiyo. Akukho malunga nokubethela nantoni na okanye ukuguqula iiparameter ezinzima, ngokutshintsha nje ipaswedi amaxesha ngamaxesha sele sinesithintelo esihle sokuthintela ukubiwa konxibelelwano. Ingakhangeleka isisiseko, kodwa ichanekile ezi ntlobo zotshintsho zilula kwaye ziyakhawuleza ukwenza zibalulekile ukugcina inethiwekhi yethu ye-WiFi ikhuselekile.
Ngokwesiqhelo oluqwalaselo lwenziwa ngokufikelela kwi-router yomqhubi wethu kwaye into ekufuneka siyenzile kukunxibelelana ne-router, nokuba ivela kwi-PC / Mac okanye kwifowuni ephathekayo, sivula isikhangeli seWebhu kwaye sifake idilesi. Ukufikelela kwahlukile kumsebenzisi ngamnye kodwa kuhlala kulula ukufumana kwinethiwekhi okanye kumaphepha abo abaqhubi. IMovistar ichonge njengeengcango zokufikelela kuzo zonke iirouters kwilizwe lethu: 192.168.1.1, 192.168.ll usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows o 192.168.0.1192.168.0.l Kwimeko yeorenji, ukunika omnye umzekelo, zezi: http://livebox o http://192.168.1.1 Kwaye xa silapho kufuneka sibeke iphasiwedi yokungena edla ngokuba yi-1234 okanye i-Admin kwaye kunjalo.
Kwelinye icala, kufanele ukuba kuthiwe sinokulawula ukufikelela kwinethiwekhi yethu yasekhaya okanye sisebenzise i-WPS, ngamanye amanyathelo esinokuwathatha ukunqanda ukufikelela okungafunekiyo, kodwa ekugqibeleni ezi ndlela azikhuselekanga nge-100%, ke musa Lindela ukuba ngale nto, ingxaki isonjululwe ngonaphakade, nangona kuyinyani ukuba ukwenza la manyathelo kuya iyanzima kakhulu ukufikelela kwinethiwekhi yethu.
Jonga izixhobo kunye needilesi zeMAC
Olu lolunye ukhetho esinokuhlala sikho kwinethiwekhi yethu ye-WiFi ukujonga ukuba ngubani ofikelela kwinethiwekhi ngaphandle kwemvume yethu. Into ekufuneka siyenzile kukujonga uluhlu lwezixhobo ezixhumeneyo kwaye uzithelekise needilesi ze-MAC nganye nganye, sinokubona ngokuthe ngqo izixhobo ezaziwayo.
Kukho ingxaki ngale ndlela kwaye kukuba zizixhobo ezingakumbi neziye sanxulumana nenethiwekhi yethu yeWiFi, ezinje ngazo zonke iimveliso ezifanelekileyo, iibhalbhu ezikhanyayo, izithethi, iimfama, njl. yenza kube nzima kakhulu ukufumana abangeneleli kwinethiwekhi yethu kwaye ngaphezu kwayo yonke loo nto kuyenza ibe ngumsebenzi omde ukuyenza.
I-RedBox-Iskena seNethiwekhi, isixhobo sokufumana unxibelelwano
Sisixhobo esitsha / isixhobo esasungulwe ngaphakathi XDA Developers simahla ngokupheleleyo (kunye neentengiso zazo) zesixhobo sakho esiphathwayo kwaye esisinika olu khetho lokufumana nokulawula zonke iinethiwekhi ngendlela elula nenocwangco ngakumbi kuba ifikelela kwidatha ngedilesi zeMAC kwaye ngale ndlela ifumana ukujoyina unxibelelwano. . Sibona zonke iinkcukacha zonxibelelwano zenethiwekhi yeWiFi, fumana unxibelelwano olungafunekiyo okanye ujonge ukubambezeleka konxibelelwano lwethu. Sisicelo esinomdla kubo bonke abasebenzisi abaziyo ukuba banokufikelela okungafunekiyo kunxibelelwano lwabo.
Ukusebenza kwesi sixhobo kulula kwaye kufuneka songeze inethiwekhi yethu ye-WiFi ukuze ibeke esweni ngokuchanekileyo izixhobo esixhume kuso. Ke iya kuqala ukukhangela unxibelelwano ngalunye olungabhaliswanga sithi. Ngokucacileyo isicelo sifuna iimvume zokufikelela kwinethiwekhi kunye nokufikelela kwindawo yethu kunye nokwazi i-SSID kunye neBSSID. Indlela yokwenza esi sixhobo silula ngokulandela la manyathelo:
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukukhuphela usetyenziso
Ngoku sifikelela kwi "Intruder detector" ukhetho ukuqala inkqubo yokubhalisa isixhobo
Singena 'kumtshini omtsha' kwaye sayiyeka iskena izixhobo. Ngoku xa igqityiwe siphawula abagunyazisiweyo
Songeza igama lomsebenzisi ongagunyaziswanga kwaye sikhethe imowudi yokufumana idilesi ye-MAC
Ixesha elifutshane lokuskena livumela unxibelelwano olungafunekiyo ukuba lubonwe ngokukhawuleza kodwa lusebenzisa ibhetri eninzi ye-smartphone ke lumka
Cofa kwi «Yenza» kwaye iapps iya kujonga ngqo inethiwekhi yabangeneleli. Ukuba ibhaqa into okanye iya kusithumela isaziso kwaye ivele kwi «My detectors»
Yiyo ke loo nto, ngoku siyabona ukuba ngaba iWiFi ibiwe ngendlela elula nekhawulezayo. Ngale sicelo sifakwe kwisixhobo sethu esiphathwayo siya kuba nakho ukulumkiswa rhoqo ngalo lonke ixesha umntu engena kwinethiwekhi ye-WiFi ngaphandle kwemvume yethu, kodwa kufuneka sithathele ingqalelo ukusetyenziswa kwebhetri kwesi sicelo kuba ihlala ifuna unxibelelwano kwaye ke ukwazi ukuba uyilawula njani kwaye ungaphelelwa yibhetri xa usebenza ngasemva.
Ngokusengqiqweni Akukho khetho inokuthintela ukufikelela okungafunekiyo kunxibelelwano lwethu lweWiFi kwaye ikhuselekile ngokupheleleyo, kodwa singakuphepha ukufikelela okungafunekiyo ngaphandle kokubenza nzima ubomi bethu njengoko kuchaziwe apha ngasentla, ngokulawula kunye nokutshintsha kwamagama agqithisiweyo kumzila wethu ngokuthe ngcembe kunokuba yinto elungileyo yokuthintela oku kufikelela. Emva koko sinokusebenzisa izixhobo ezinomdla njengeRedBox ukuphanda kancinci kwaye siphephe unxibelelwano olungafunekiyo kangangoko kunokwenzeka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Uyazi njani ukuba i-WiFi yam ibiwe kwi-Android